सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स : बीमा योजना धेरै, शुल्क सस्तो:: Artha Dabali
सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स : बीमा योजना धेरै, शुल्क सस्तो
केशवराज केशी, डेपुटी जनरल म्यानेजर, सानिमा लाइफ
वि.सं. २०७४ सालदेखि संचालित यस कम्पनिले जीवन बीमाका विभिन्न योजना मार्फत ग्राहकलाई सेवा दिदै आएको छ । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको कारोवारको अवस्था राम्रो छ । हामीले छोटो समयमै धेरै ग्राहकको मन जित्न सफल भएका छौ. ।
सानिमाले २०६४ मै विमा समितिमा निवेदन दिएको थियो । १० वर्षसम्म पेन्डिङ्गमा रहेर २०७४ कार्तिकमा संचालनको अनुमति पाएपछि आफ्नो कारोवार थालेको हो । यसले प्रत्येक वर्ष ४ करोडको कारोवार गर्दै आएको छ ।
अहिले सानिमाले सानिमा सरल, सानिमा शुभलक्ष्मी , सानिमा धनपति, सानिमा बालसौगात, सानिमा दम्पत्ति, सानिमा धनफिर्ता जस्ता विभिन्न बीमा योजना मार्फत ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ । अहिले ५० वटा शाखाबाट कारोबार भैरहेको छ । अव छिटै एक सय वटा शाखा विस्तार गर्ने तयारी छ ।
बीमाको लगानी प्रतिफयोग्य
अहिले बीमा कम्पनी विच बजारमा तिव्र प्रतिस्पर्धा छ । देशको जनसंख्या तथा क्षेत्रफल नै सानो आकारको भएकोले कारोवार पनि सिमित मात्र छ । नेपालमा प्रति कम्पनिको भागमा करिव १५ लाख जनसंख्या पर्छ । जवकी भारतमा एक कम्पनिको भागमा नै ५ करोड जनसंख्या पर्छ । तैपनि बीमा क्षेत्रमा गरेको लगानी प्रतिफल योग्य छ । गाहक र कम्पनि दवै पक्षको भविष्य सुरक्षित छ ।
बीमाप्रति सचेत जनता
पछिल्लो समय बीमा संवन्धमा जनस्तरमा सचेतना बढेको छ । फलस्वरुप विमा कम्पनिको व्यासाय पनि बढेको छ । मानिसहरुमा आफ्नो लगानी सुरक्षित कसरी हुन्छ, प्रतिफल कहाँ राम्रो पा्इन्छ भन्ने बारेमा निकै चासो रहने हुँदा हरेक व्यक्तिले बुभेर मात्र लगानी गरेको हुन्छ । र त्यस्तो लगानी डुव्ने खतरा हुदैन । जसको कारण विमा कम्पनीले जनविश्वास संगालेर आफ्नो कार्यक्षेत्र र सेवा बढाउदै जाने अवसर पाएका छन् ।
कम शुल्कमै बीमा
सानिमामा तुलनात्मक रुपमा अन्य कम्पनीमाभन्दा कम शुल्कमा बीमा गर्न पाइन्छ । विमा शुल्क सस्तो र आर्वषक सुविधा धेरै छन् । ग्रहकलाई पाएक पर्ने ठाउँमा शाखा विस्तार भैरहेका छन् । सेवा सुविधा पनि राम्रो छ । सनिमाले भर्खरै धन फिर्ता योजना ल्याएको छ । यसले पनि धेरै ग्राहकको मन जितेको छ ।
अग्रीम धनफिर्ता योजना आकर्षक
सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले सानिमा वार्षिक धन फिर्ता (अग्रिम भुक्तानी सवाधिक) जीवन बीमा योजना ल्याएको छ । यस योजनाका विशेषताहरुमा न्यूनतम बीमाङ्क एक लाख रुपैयाँ र अधिकतम बीमाङ्क आयस्रोतको आधारमा निर्धारण हुनेछ । १६ वर्षदेखि ५५ वर्ष उमेर समूहसम्मका जीवन बीमाका लागि योग्य व्यक्तिले यस योजनाअन्तर्गत १५ र २० वर्षे अवधिको लागि जीवन बीमा गर्न सक्नेछन् ।
यस योजनामा अधिकतम बीमा समाप्ति उमेर ७० वर्ष रहेको छ । बीमा सुविधा रकम पाउने अवस्थामा १५ वर्ष अवधिको लागि जीवन बीमा गरेमा प्रत्येक वर्ष बीमाको वार्षिकोत्सव मितिमा बीमाङको ६ प्रतिशतका दरले भुक्तानी हुनेछ । २० वर्ष अवधिको लागि जीवन बीमा गरेमा प्रत्येक वर्ष बीमाको वार्षिकोत्सव मितिमा बीमाङको ५ प्रतिशत्रका दरले प्रदान गर्नेछ । यसरी प्राप्त रकमबाट भैपरी आउने सामाजिक गर्जो टार्न, बालबालिकाको शिक्षामा खर्च गर्न र नवीकरण बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न समेत सहयोग मिल्ने छ ।
दुवै अवधिको बीमा योजना अन्तर्गत बीमा समाप्ति मितिमा अग्रिम भुक्तानी गरी बाँकी रहेको बीमाङ र पूरा अवधिको आर्जित बोनस एकमुष्ट प्रदान गरिने छ । बीमा अवधिभित्र बीमालेख चालू रहेको अवस्थामा बीमितको मृत्यु भएमा आग्रिम भूक्तानी गरेको रकम कट्टा नगरी शतप्रतिशत बीमाङ र समानुपातिक आर्जित बोनस एकमुष्ट बीमितको इच्छाएको व्यक्ति वा सो नभए बीमा ऐन २०४९को दफा ३८ अन्तर्गतको कानुनी हकवालालाई भुक्तानी गरिने छ ।